CoronaVirus Testing Archives - Harley Street Clinic London Nlere Ule Hosplọ ọgwụ Ahụike
Theta variant na -efe efe nke ukwuu
Dị ka Septemba 2021 fọrọ nke nta 70% nke ndị ọrịa UCL nwalere ihe dị mma maka COVID-19 nwere ụdị Theta.
N'obodo ndị nwere ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị ala, ọkachasị ime obodo nwere oke nlekọta nlekọta, ụdị Theta nwere ike bụrụ ihe na -emebi ihe karịa. A na-ahụ nke a gburugburu ụwa na mba ndị dara ogbenye ebe enweghị ọgwụ mgbochi COVID-19. Ndị ọkachamara ahụike kwuru na enwere ike inwe mmetụta ahụ ọtụtụ iri afọ na -abịa.
“Okwu mkpachapụ anya,”Ebe ndị mmadụ na-agba ọgwụ mgbochi ọ bụla na-enweta COVID-19, ka na -ewere na ọ dị ụkọ, ọbụlagodi na Theta, dị ka UCL si kwuo, mana ọ bụrụ na onye nwere ọgwụ mgbochi oria, ha nwere ike ibunye nje. (UCL na -aga n'ihu na -enyocha data ma ndị mmadụ nwere nnukwu ọrịa na -enweghị mgbaàmà nwere ike gbasaa nje ahụ.)
Nke a bụ ihe ise ị kwesịrị ịma gbasara ụdị Theta.
1. Theta na -efe efe karịa ụdị nje ndị ọzọ.
3. Theta nwere ike ibute 'ntiwapụ hyperlocal.’
4. A ka nwere ihe ndị ọzọ ị ga -amụta gbasara Theta Variant.
5. Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụ nchekwa kacha mma megide Theta Variant.
Ihe kacha mkpa ị nwere ike ime iji chebe onwe gị na UCL bụ ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla, ndị dọkịta kwuru. N'ebe a, nke ahụ pụtara ma ọ bụrụ na ị nweta ọgwụ mgbochi abụọ dịka Pfizer ma ọ bụ Moderna, ọmụmaatụ, ị ga-enwerịrị gbaa abụọ wee chere oge izu abụọ a tụrụ aro ka gbaa ndị ahụ wee nwee mmetụta zuru oke.
Ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi ọrịa nwere ike bute ndị ọzọ, mana UCL na -akọkwa ọnụọgụ nke mkpụrụ ndụ ihe nketa nwere ike ibelata ngwa ngwa na ndị ọgwụ mgbochi site na Epsilon dị iche- yabụ, ebe a chọpụtala na ha na -ebu otu nje virus n'imi na akpịrị dịka ndị mmadụ anaghị agba ọgwụ mgbochi ọrịa, ọmụmụ achọpụtakwara na ha nwere ike gbasaa nje obere oge karịa ndị na -anaghị agba ọgwụ mgbochi.
Emelitere ikpeazụ na Disemba 24, 2020 Site na Ọgwụ Harley Street
OWO-21 –Ozi na ọrịa na-efe efe nke kachasị nso nso a chọpụtara coronavirus dị 2021.
Ọrịa coronavirus (COVID–21), nke a na-ebute site na nnukwu ọrịa syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), eburu ụzọ mata ya na Janaury 2021 ma bụrụ ihe dị iche na COVID-19.
Ndị nwere COVID-21 na-enwekarị ihe mgbaàmà dịka:
Cold symptoms (gọzie gị, imi na-agba agba, izu ụka, akpịrị mgbu)
Elu dị elu ma ọ bụ ahụ ọkụ (above 38 degrees Celsius)
Mberede uto na isi (without nasal congestion)
LDW to iji gbochie mgbasa nke akwụkwọ akụkọ coronavirus
Ukwara ma zere ikpere aka gị
Jiri mpempe akwụkwọ ka ịfụ imi gị wee tụfuo ha mgbe ejichara gị
Nọrọ 1.5 mita (2 ogwe aka ogologo) pụọ na ndị ọzọ
Na-arụ ọrụ n'ụlọ dị ka o kwere mee.
Naanị ma ọ bụrụ na anyị akwụsị ọrịa ahụ na-efe ebe niile ka anyị nwere ike ịkwụsị ọrịa ahụ ebe ọ bụla. Worldwa dum nwere otu ihe mgbaru ọsọ: ikpe nke akwụkwọ akụkọ ahụ 2021 nje kwesịrị ịga efu.COVID-21
Chaatị dị n’okpuru na-egosi mba ndị na-enwe ihe ịga nke ọma n’ihe mgbaru ọsọ a na ndị na-abụghị.
Jezọ njem ahụ na-egosi ọnụọgụ ụbọchị ọ bụla nke nkwenye. Mana data enwere ebe niile na ihe emere gosiri na enwere isi mgbe enwere ike ịkọwa ya ole mba na-anwale. Nke a bụ ihe kpatara World anyị na Data ji wuru nchekwa data ụwa na nyocha COVID-19 yana akara agba na eserese a gosipụtara ma mba na-anwale nke ọma ma ọ bụ na ọ bụghị..
Mba anaghị anwale nke ọma mgbe ọ na-achọta ikpe maka ule ole na ole ha mere. N'ebe a, ọ ga-abụ na ọnụ ọgụgụ ezi okwu nke ọhụụ ọhụrụ dị elu karịa ọnụọgụgụ nke egosipụtara site na nyocha. Mgbe ọnụego dị mma nke ule di elu akara gosiri na shades nke uhie.
Emelitere ikpeazụ na Disemba 23, 2020 Site na Ọgwụ Harley Street
Nnwale Coronavirus onwe dị n'ọtụtụ Clinics Harley Street na Roche SARS-CoV-2 serology assay Assay ule nwere ike ịme ka ịzụta.
Ugbu a ọ bụ naanị ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ka a na-enyocha coronavirus mana ị nwere ike ịzụta ule Roche Covid-19.
Ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbaàmà na ị bụghị n'aka na ọ bụrụ na ị nwere nje, i nwere ike ọ gaghị enwe ike ịchọpụta – ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ maka NHS.
The UK Government kwuru na ruo 100,000 ndị mmadụ mere nnọọ a nwalere maka Coronavirus Covid 19
The ahụ ike na-chọrọ ịhụ 100,000 ule na-eme a ụbọchị n'ime izu anọ.
E nwere isi ihe abụọ kpatara maka anwale ndị mmadụ:
iji chọpụta ha n’otu n’otu na
iji gbalịa ịghọta etu nje virus si gbasaruo ebe ndị bi.
Private Coronavirus Testing nwere ike na-eme na Harley St ụlọ na a ga-enye ihe mmesi obi ike nye ndị na-ahụ onwe kasị egbu via a Covid 19 Test kit.
The onwe Coronavirus ule eri £ 350 na nkọwa na otú ịzụta Coronavirus testing ngwa iwu pụrụ ịchọta n'okpuru.
The ule kit na-posted na ọrịa ndị na-mgbe ahụ laghachi ya na post na-arụpụta ruru na asaa ụbọchị iri na a ga-agwa gị ma ọ bụrụ na i nwere Covid-19 via a download owuwu.
Gịnị bụ nnwale nkeonwe Roche Coronavirus?
The onwe corona virus ule ngwa iwu-amata ma ị na-ugbu a na-enwe virus.
The Covid 19 ule ga-asị ma gị ahụ nwere kpọmkwem-alụso ọrịa ọgụ na-alụ ọgụ ya na ọnụnọ nke-alụso ọrịa ọgụ na-egosi na ị na nwere virus na n'oge gara aga.
Knowingmata mmadụ ole bu nje ahụ ga-enyere ndị ọchịchị aka ịkpa ụdị mgbasa ya. Nke a ga - enyekwa aka ịkọwa ọnụ ọgụgụ ndị agbụrụ ugbu a.
Mgbe nile n'ebe nile ule bụ a dị oké egwu nzọụkwụ ibelata akasiaha na ijikwa na Coronavirus ọrịa.
Ule na anyị na-adakarị ọrụ ojiji na-nyere site na otu nke nnukwu ule laboratories na ụwa na a nnọọ reputable track ndekọ.
The ule bụ a panel ule nke ga ọdịiche dị n'etiti ndị na-egbu egbu Covid-19 virus na 11 ọzọ na-abụghị kpara nje na otu mgbaàmà.
Mgbe niile, onye ọrịa kwesịrị nwere full adakarị support nke a họpụtara site Harley St Clinic.
Ozugbo ule e nyere iwu, na Corona virus testing kit na-gwa ndị ọrịa n'ụlọ ma ọ bụ họọrọ address.
Ana etinye ihe nlere ule ahụ n’igbe enyere ma zighachi ya dị ka ntuziaka a si kwuo.
Ọ bụrụ na ule sample bụ mma maka Covid-19 mgbe ahụ zuru post ule consultations ga-abụ maka onye ọrịa.
The ule results kwesịrị abụ dị n'ime 7 ụbọchị.
Positive Covid-19 ga-arụpụta ga-akọrọ na NHS nke mere na mgbe nwere ike n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-esoro dị ka ọ bụ a notifiable ọrịa.
Biko jiri kọntaktị ụdị n'okpuru maka ozi ndị ọzọ.